Ku hel farriimaha SMS iyo lambarrada xaqiijinta SMS onlayn
Nuqul ka mid ah lambarrada taleefannadayada oo u isticmaal inaad ku hesho farriimaha khadka tooska ah iyo lambarrada xaqiijinta adigoo adeegsanaya SMS.
Kordhinta asturnaantaada adoo adeegsanaya nambarada taleefankeena. Qari aqoonsigaaga khadka tooska ah adoo adeegsanaya nambarada taleefanada si aad uhesho farriimaha SMS iyo lambarrada xaqiijinta SMS, dhammaantood internetka. Diiwaangelin looma baahna. Adeegyadeena gabi ahaanba waa bilaash.
Dhamaan nambarada taleefannadeena waa kuwo dhab ah, kaararka SIM-ga jirka. Sidaa darteed, waxaan hubnaa in farriimaha ay si dhaqso leh ugu gaaraan aqbalaheena dhowr ilbidhiqsiyo iyo kalsooni leh.
Farriimaha waxaa soo gaaraya barnaamijkeena waxqabadka sare ee SMS. Lambarrada taleefannada kama xirno goobaha kale, lambarada taleefannadeena ayaa asal ah waxayna ka tirsan yihiin howlaheenna.
Lambarradayada taleefannada waxaad ka heli kartaa farriimaha SMS-ka khadka tooska ah iyo sidoo kale lambarrada xaqiijinta SMS ee adeegyada sida Facebook, Paypal, Twitter, Instagram iyo kuwa kale. U adeegso lambarrada taleefannada si kalsooni leh, ma haystaan taariikh dhicitaankooda, sidaa darteed iyagu way joogi doonaan markasta oo aad u baahatid.